A ga-enwe achicha: Kedu ka usoro Palmirinha si arụ ọrụ? Chọpụta ebe a!
Carbohydrates: Ha bu ndi ojoo nke nri? Mee ka o doo gị anya!
Ngwaahịa	 4 October 2018
Fica nwere achicha: Mara amara Palmirinha ma melite azụmahịa achicha gị!
You na-achọ ịmalite azụmahịa nke gị mana ị maghị ebe ị ga-amalite? Kedu maka otu otu esi nri na Brazil? N'ihi na Fica Vai ter Bolo bụ usoro Palmirinha ma kụziere gị usoro kachasị mma iji nwee azụmaahịa ịre achịcha. You nwere ike ịmalite ozugbo n'ụlọ! Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe niile gbasara ihe ọmụmụ a na uru dị iche iche sọọsọ ụmụ akwụkwọ nwere, gụọ ma hụ otu o si arụ ọrụ.
Nye na-enweghị mgbe ọ bụla ọ ga-esi sie nri ọ bụla nne nne Palmirinha ji esi nri n’ụlọ? Ugbu a ọ dịkarịrị mfe, n'ihi na iji Fica Vai Ter Bolo mee ihe ị nwere ike! Usoro a nwere nkuzi vidiyo na akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-enweghị atụ, nke mere na ọbụlagodi ndị na-abụghị ọkachamara na kichin nwere ike ịme usoro niile ma nwee azụmaahịa na-aga nke ọma. Na iji zụta usoro a ugbu a na ọnọdụ a kapịrị ọnụ ma ka na-asọmpi maka ego na-enweghị atụ, naanị ịkwesịrị ịnweta weebụsaịtị webụsaịtị www.ficavaiterbolo.com ma kwenye na ọnọdụ gị na klas ọzọ.
Ka nwere ike pịa bọtịnụ dị n'okpuru ma debe oche gị, mana mee nke a ozugbo enwere ike, ebe ha nwere oke ma ọ fọrọ nke nta ka erepụ ha. Miss gaghị agbaghara ohere ka a ga-ekwe nkwa mmezi ego na Ezi ntụziaka ndị na-aga nke ọma!
[junkie-alert style = "acha ọbara ọbara"] Ntị! Anyị anaghị ere usoro a, anyị bụ weebụsaịtị nwere ozi na ozi, ịzụta pịa ebe a iji gaa na webụsaịtị gọọmentị [/ junkie-alert]
Ego ole? Ego ole ka m ga-akwụ Fica ga-achicha?
Maka ndị na-azụta akwụkwọ Palmirinha ọbụlagodi taa, ha nwere ike ịnwe oke ego ma kwụọ naanị $ R $ 197 iji nweta vidiyo niile na klaasị, usoro kachasị mma na ihe nzuzo nke mere nne nne Palmirinha bụ otu n'ime ndị isi nri kacha mma. Brazil. Na mgbakwunye na usoro zuru oke, ị na-enweta ego na-enweghị atụ, yana onyinye dị oke egwu nke a raara nye naanị ụmụ akwụkwọ 100 mbụ nke Fica Vai ter Bolo. Yabụ, zụta ozugbo enwere ike iji merie onyinye a, na mgbakwunye na ịnwe ike isonyere naanị otu facebook na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ wee jiri ọnụ ahịa nkwado a.
Ego a bụ obere oge, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-alaghachi na ọnụahịa nkịtị nke R $ 597 reais, na-ekwe nkwa ọnụahịa kachasị ala site na ịzụta ugbu a na weebụsaịtị webụsaịtị!
Onye bu akwukwo Palmirinha
Ihe ọmụmụ Fica Vai ter Bolo da Palmirinha bụ maka ndị na-achọ ego ọhụụ ma ọ bụ iji gbakwunye ego ezinụlọ ha site na ịme achịcha n'ụlọ. Usoro a nwere ike ịnwe ndị mmadụ nọ n'afọ ndụ niile, mana ọ zuru oke maka ụmụ nwanyị ndị na-achọ ego nke abụọ, ma ọ bụ ọbụna ụzọ iji nweta nnwere onwe ego.
Site na nkuzi na usoro ndi nkuzi nke Palmirinha Course ga akuziri gi, n'ime ubochi ole na ole ị gha ghaputa ego nile ma na ahia mbu i gha enwe ego gi. Jiri ohere a wee mụta ihe site n'aka onye na-akụzi usoro kachasị mma maka ihe karịrị afọ 60 na onye bụ ezigbo nri nri. Usoro a ga - agbanwe ndụ gị ma bulie ego gị, naanị ị nwere uru ma ị ga - enweta ọtụtụ otito na usoro nri gị. Bụrụ onye na-eme achịcha na-eme nke ọma ma nwee azụmaahịa nke gị site na enyemaka nke onye ghọtara isiokwu ahụ n'ezie!
Daashi na-aga nwere achicha
Na mgbakwunye na ohere ịnweta azụmahịa nke gị ma nwee ike irite ọtụtụ uru site na ire achicha emere n'ụlọ, ị ga-enwetakwa ego na-ezughị oke nke naanị ịzụta na weebụsaịtị webụsaịtị ị nwere nkwa a. Na mgbakwunye na nkuzi vidio nke Palmirinha n'onwe ya dere, ị ga-enweta akwụkwọ ntanetị na akwụkwọ iri kacha mma na ihe nzuzo iji mee ka usoro nri gị pụta zuru oke. Na mgbakwunye, ịnwere mpempe akwụkwọ iji tinye mmefu na ụgwọ gị wee si otu a mara ego ole ị na-erite na azụmaahịa gị.
Ma ọ kwụsịghị ebe ahụ, ịnata akwụkwọ pụrụ iche site na Palmirinha dị ka ego, yana ịnweta nkata ndụ na onye okike n'onwe ya na ịnweta otu ụmụ akwụkwọ na Facebook, ebe ị nwere ike ịgbanwere ndụmọdụ na ahụmịhe ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ. n'ezie ma nwekwaa ike ịgbasa azụmahịa gị.
Na mgbakwunye na ego ndị a niile, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ụmụ akwụkwọ 100 mbụ, ị nwere nnukwu onyinye iji nweta mmeri site na Palmirinha Fica Vai ter Bolo. Mana onyinye a bụ naanị maka 100 kacha elu, ya mere ngwa ngwa zụta nke gị ugbu a iji nweta ego ahụ.
Enwere usoro mmesi obi ike?
Zụtara usoro ahụ mana ọ gbanweeghị? Nsogbu adịghị! N’agbanyeghi na ijide n’aka na ị ga enwe mmasị n ’ụzọ Palmirinha na ị ga - enwe azụmaahịa nke gị n’ụbọchị ole na ole n’ụlọ ma jiri obere ego tinye ego. Nwere ụbọchị 7 nke enweghị akwụkwọ ikike na ngwaahịa gị. Nkwa a dị irè site na mgbe ịnwere ohere ịnweta usoro a, ma ọ bụrụ na n'ime ụbọchị asaa ịchọrọ ịkwụsị, zigara email na Fica Vai ter Bolo email ma rịọ maka nkwụghachi nke ego gị. Ọ dị ngwa ma dịkwa mfe, ụbọchị ole na ole ị nwetaghachiri ego gị n’enweghị ọrụ ọchịchị.
Ọ bụ onyinye ị na-agaghị echefu, zụta ugbu a iji rite uru n'ọkwá dị elu!
A ga-enwe achicha na asambodo?
Gụchara klaasị niile na nkuzi ahụ? Mgbe ahụ ị nwere ike ibipụta akwụkwọ gị nke mmecha nke Fica ga-enwe usoro achicha, yana akwụkwọ a ị nwere ike igosi ndị ahịa gị niile na ị were Palmirinha Course ma mụta usoro nri achicha kachasị mma, na mgbakwunye na obere nzuzo nke naanị ụmụ akwụkwọ ga-ama!
Ga-enweta ohere ahụ site na email yana akwụkwọ ntanetị na akwụkwọ a na-ebipụta, mara na ọ nweghị ihe a ga-eziga n'ụlọ gị. Gbaa mbọ hụ na email gị ziri ezi ka ị nweta ọdịnaya niile ma bido ịmalite ime nri taa!
Boldenone: mara ihe niile banyere ọgwụ a nke ndị na-eme egwuregwu na-ejikarị
Chia ntụ ọka: Uru na otu esi eji ya
nri lactose n'efu
Ikike Okike: Chọpụta uru niile dị n’egwuregwu a ma gbanwee omume gị na ndụ gị
Mgbatị Hypertrophy: Ghọta ụdị mgbatị ọ bụla